Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo ka hadlay wada hadalada Somaliland
Loading...	Home Wararka Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo ka hadlay wada hadalada Somaliland
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo ka hadlay wada hadalada Somaliland	Tuesday, 19 June 2012 10:36	Wasiirka arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka C/samad Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay wada hadalada dhex mari doona Somaliland iyo Soomaaliya, isagoo rajo ka muujiyay in natiijooyin wax ku ool ah ay ka soo baxaan.
C/samad Macalin Maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa Madax u ah Gudiga Dowladda KMG matalaya ee ka qeyb galaya wada hadalada Somaliland, kaasoo lagu wado in maalinimada berri uu ka furmo Magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Wasiirka waxaa uu rajo ka muujiyey in si wanaagsan uu ku dhamaan doono wadahadalka, waxaa uu amaaney wafdiga ka socdo dhanka Somaliland, waxaa uuna intaasi raaciyey in fikradda labada dhinac ay isu dhawdahay, in kasta oo uu sheegey in ay dhici karaan waxyaabo ay isku khilaafsanyihiin.
"Runtii wada hadaladaas waxaan rajeyneynaa in natiijo wanaagsan ka soo baxaan, Gudiga aan madaxda u ahay waxay u diyaar garoobeen inay u ambabaxaan London"ayuu yiri C/samad.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Gudiga Dowladda KMG wax laga bedelay, iyadoo ay ku jiraan Safiiro ka tirsan Safiirada dalalka deriska u fadhiya Dowladda Soomaaliya, kaasoo uu ka mid yahay Safiirka Jabuuti.
Gudigii Somaliland uga qeyb galayay wada hadalada ayaa gaaray Magaalada London, iyadoo uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibada Dr. Maxamed C/llaahi Cumar